China Triphenyl Phosphate ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Uba
The plasticizer bụ ụdị nke elu molekụla ihe nnyemaaka ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ. Gbakwunye ụdị ihe a na nhazi plastik nwere ike ime ka mgbanwe ya dịkwuo mfe ma mee ka ọ dị mfe nhazi, belata mmụkọ dị n'etiti polymer molecules, ya bụ van der Waals ike, si otú a na-abawanye ngagharị nke agbụ polymer, na-ebelata crystallinity nke polymer molecules.
Gas chromatography na-anọ ọdụ mmiri (kachasị ọrụ okpomọkụ 175 ℃, ihe mgbaze diethyl ether) nwere nhọrọ dị ka polyethylene glycol ma nwee ike ịchekwa ogige mmanya.
Triphenyl Phosphateis bụ ihe na-egbu egbu na ọkụ.
Ekwesiri ịchekwa ya na ebe dị jụụ, ikuku ikuku, na ebe akọrọ ma chekwaa iche na oxidizer.
A na-eji Phohenyl Phosphate eme ihe dị ka plasticizer maka mmiri mmiri chromatography gas, cellulose na plastik, yana dị ka ihe na-abụghị combustible dochie anya maka camphor na celluloid.
A na-eji ya eme ka plastic na fluidity nke plastic dị n'oge nhazi na ịkpụzi.
Ejiri ya dị ka plasticizer maka nitrocellulose, acetate fiber, polyvinyl chloride, na plastik ndị ọzọ.
A na-ejikarị ya eme ihe dị ka plasticizer na-ere ọkụ maka resin cellulose, vinyl resin, roba roba, na roba sịntetik, a pụkwara iji ya mee ihe maka plastik injinia na-enwu ọkụ dị ka triacetin thin ester na ihe nkiri, polyurethane foam siri ike, resin phenolic, PPO, wdg.
1 、 Okwu ndi ozo: triphenyl phosphoric acid ester; PPdị TPP2 ula: (C6H5O) 3PO 3 weight Molekụla: 326 4 、 CAS NO.: 115-86-65 、 Nkọwapụta Ọdịdị: White flake solidAssay: 99% min Pụrụ Iche Pụrụ Iche (50 ℃): 1.185-1.202Acid Uru (mgKOH / g ):: 0.07 maxFree Phenol: 0.05% maxMelting Point: 48.0 ℃ minColor Bara Uru (APHA): 50 maxWetent Content: 0.1% max6, mbukota ： 25KG / net bag net, foil panel na pallet, 12.5 tọn / 20ft FCL Ngwaahịa a dị ize ndụ ibu : UN3077, KLAS 9